राजेन्द्र महतो को हुन, उनको नागरिकता नक्कलि हो त? – नेपालि भिडियो ब्लग, पहिलो र एक मात्र
राजेन्द्र महतो को हुन, उनको नागरिकता नक्कलि हो त?
Posted on January 8, 2016 January 8, 2016 by Anand
युवा संघका तराइ–मधेशका नेताहरुले सद्भावना पार्टिका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको नागरिकता छानविनको माग गर्दै गृहमन्त्रि शक्ति बस्नेतलाइ एक ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । सो ज्ञापनपत्रमा महतोसँग भारत र नेपालको दोहोरो नागरिकता भएको भन्दै छानविनको माग गरिएको छ।
यस अघि, महतो बहालवाला मन्त्रि रहँदा पनि महतोको नागरिकताबारे छानविनको माग भएको थियो । बि.स. २०६८ मा अख्तियारले महतोको नागरिकताको बारेमा चासो दिएर गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार पनि गरेको थियो । गृहमन्त्रालयले सर्लाहि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सित राजेन्द्र महतोको नागरिकता सम्बन्धि विवरण माग्दै पत्रसमेत लेखेको थियो । महतोको नागरिकता सम्बन्धि अभिलेख फेला नपरेको र त्यसबेला महतो मन्त्रि भएका हुनाले छानविन हुन नसकेको भन्दै सर्लाहि प्रशासनले उत्तर पठाएको थियो ।
अहिले पनि युवा संघको ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा गृहमन्त्रि बस्नेतले घुमाउरो पाराले समाधानको उपयुक्त विधि सरकारले छनोट गर्ने बताएका थिए । जानकारहरु तत्काल छानविन हुने सम्भावन कम रहेको बताउँछन । किनकि, नागरिकता छानविन गर्न थाल्दा सरकार र मधेसी मोर्चा बिचको वार्ता प्रक्रियामा समस्या हुने सम्भावना देखिएको छ।
युवा संघको ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा पनि गृहमन्त्री बस्नेतले घुमाउरो जवाफ दिएका थिए । उनले नागरिकता विवादमा सरकार गम्भीर रहेको भन्दै यसको समाधानको उपयुक्त विधि सरकारले छनोट गर्ने बताएका थिए ।
राजेन्द्र महतो को हुन ?
बिगत २५ वर्षदेखि नेपालमा राजनीति गरिरहेका राजेन्द्र महतो पटक-पटक मन्त्रीसमेत भइसकेका राजनितिग्य हुन । उनको पुख्र्यौली घर भारतको सिमामा रहेको भारतको सितामढिमा जिल्लाको कोहवरवा गाउँमा रहेको र ससुरालि पनि उतै भएको बताइन्छ । कोहरवा गाउँ नेपाल-भारत सिमाबाट करिव १५ किलोमिटर दुरिमा रहेको छ । महतोको भारतमा भएको घरमा उनका काकापट्टिका सन्तानहरु बस्ने गरेको अनलाइन खबरमा लेखिएको छ । उनका तीन दाजुभाइ भने अहिले नेपालमा नै बसोबास गर्छन।
जानकारहरुले भने अनुसार राजेन्द्र महतोका बाबु खोभारि सुडी भारतीय नागरिक थिए । पहिले सुडी थर हुनेले आजकल महतो वा साह लेख्न थालेको हुनाले राजेन्द्र महतो भएका हुन। खोभारि व्यापार गर्न भनेर २०२० सालतिर नेपाल आएर र सर्लाहिको बयलवासमा उनले धान-चामलको व्यापार शुरु गरेका थिए। उनको ब्यपार फस्टाउँदै गए पछि उनले सर्लाहिको ब्रम्हपुरि गाविसमा घर बनाएर बस्न थाले ।
महतोले आफ्नो पुर्ख्यौलि गाउँ कोहबरवासँगै जोडिएको मरिया भन्ने गाउँकि स्थाइ बासिन्दा शैलकुमारि देविलाइ बिहे गरेका हुन् । शैलकुमारि पनि हाल समानुपातिकबाट संविधानसभा सदस्य छिन । शैलकुमारिले महतोसित विवाह गरेपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएकी हुन । संविधानसभा सदस्यको परिचयात्मक किताबका अनुसार शैलकुमारिले २०४७ सालबाट राजनितिमा लागेको र एसएसलसिसम्म अध्ययन उल्लेख छ। शैलकुमारि मधेसी महिला समाज र सुडि समाजकि केन्द्रीय सदस्यसमेत हुन् । महतो दम्पत्तिका एक छोरा र एक छोरि छन् ।
राजेन्द्र महतोले २०२१ सालतिर काठमाडौं आएर ताहचल क्याम्पसमा बसेर पढनुको साथै सानातिना व्यापार पनि गर्ने गर्थे । केही समय गार्मेन्ट व्यवसाय गरेका महतोले ठेकेदारिको काम सुरु गरे जसमा घरमा रंग लगाउनेदेखि कार्यालयहरुमा स्टेशनरि सामानहरु सप्लाइ गर्नेसम्मका काम पर्दथे।
त्रिभुवन विमानस्थलको फोहोर उठाउने ठेक्का हात पारेपछि भने महतोले राम्रै पैसा कमाएको अनलाइन खबरले लेखेको छ । उनि राजनितिमा लागेको भने ०४६ सालपछि मात्रै हो । उनि ब्यापारको सिलसिलामा नै मधेसवादि नेता गजेन्द्र नारायण सिंहसंग नजिक भएका थिए । उनिहरु बिहको सम्वन्ध बढदै गए पछि उनि पनि राजनिति तर्फ लागेका हुन् । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सामेल नभएका र धेरै पछि मात्रै राजनितिमा प्रवेश गरे पनि उनले पुराना र अनुभवि मधेसि नेताहरुलाई पछि पार्दै अहिलेसम्म चारपटक मन्त्रि बनिसकेका छन। उनले पछिल्लो संविधानसभाको चुनावमा भने आफ्नै गृहजिल्ला सर्लाहिमा हारेका थिए ।आफु हारे पनि महतोले समानुपतिकबाट आफ्नै श्रिमतिलाइ सभासद बनाउन भने सफल भएका थिए ।
राजेन्द्र महतोले केही समयअघि मात्रै ‘अब कहिल्यै मन्त्रि नबन्ने’ भनेर घोषणा गरेका थिए ।
राजेन्द्र महतोले नागरिकता कसरि लिए ?
राजेन्द्र महतोका बाबु छोराले नै नेपाल बसोबास गर्न थालेको केहि समयमा नै नेपालि नागरिकता लिएको हुन सक्ने सम्भावना छ । उनले ०२७/०२८ तिर नेपालि नागरिकता लिएको र सो नागरिकता दिलाउन सर्लाहिका तत्कालिन जिल्ला विकास समितिका सभापति अमरबहादुर थापाको मुख्य भुमिका भएको आशंका गरिएको छ । कासै कसैले त अझ बाबुले भन्दा पहिले छोरा राजेन्द्रले नागरिकता लिएको दावि गरेका छन् । तर यि सबै रे का कुरा मात्र हुन् किनकि यि तथ्य प्रमाणित गर्ने सबै कागजात भने नष्ट भइ सकेका छन् ।
माओवादीले सर्लाहि जिल्ला सदरमुकाममा हमला गरेर सबै कागजात नष्ट गरेपछि त्यहाँ भएका सबै नागरिकता सम्बन्धि प्रमाणहरु नष्ट भइसकेका छन । महतोले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएको दाबि गर्ने गरेका छन् । तर, नेपालको कानुन ज्ञाताहरु का अनुसार उनले नागरिकता प्राप्त गरेको समयमा जन्मसिद्द नागरिकता लिन पाउने प्राबधान नै खारेज भइ सकेको थियो । बि.सं. २०१९ साल भन्दा पहिले नेपालमा आएर लामो समय बसोबास गरेका ब्यक्तिलाइ जन्मसिद्ध नागरिकता दिने व्यवस्था भएको भए पनि सो ब्यबस्था २०१९ सालपछि हटाएर बंशजको आधारमा मात्र नागरिकता दिने ब्यबस्था भएको थियो ।
राजेन्द्र महतोको आलिसान महल
महतोले काठमाडौंको भिमसेनगोलामा एक आलिसान घर किनेका छन् । मधेसलाई काठमाडौंले हेपेको बताउने महतोले काठमाडौंमै करोडौंको महल ठड्याएको भनेर बिरोध को आवाज उठने गरेको छ । उनले किनेको घरको आय स्रोत पनि प्रष्ट छैन । महतोले काठमाडौंमा नै रहेको अर्को निवास सिनामंगल भत्केको पुलमा रहेको छ । यो महतो निवास भने सामान्य नै छ । केहि समय पहिले आक्रोशित भिडले भारतलाई नाकाबन्दी गर्न सघाएको आरोपमा उनका घर तोडफोड र आगजनिको प्रयास गरेको थियो ।
यि काठमाण्डौंका घरको साथ साथै, महतोले संविधानसभाको चुनाव हारे लगत्तै सर्लाहिमा पनि भब्य घर किनेको खवर छ । उनले करिव रु ७० लाख रुपैयाँमा एक लज सहितको घर किनेको तर, उनले त्यो घर भने आफ्नो नाममा नराखेको बताइन्छ ।
This entry was posted in People, Politics and tagged citizenship, Rajendra Mahato. Bookmark the permalink.
← महानायिका राजेश हमाल
शिव श्रेष्ठ को हुन ? पुराना नेपालि अभिनेता शिवको परिचय →
नेपाल जाँदा भन्सार नलाग्ने सामानहरु, बिमानस्थलका सम्पर्क फोन
अलबिदा प्रचण्ड पुत्री ज्ञानु केसी दाहाल